Baldachin Bernini, ibaldachin yaseBernini - isixeko saseVatican
Yurophu Kwisixeko saseVatican
Idilesi: I- St Peter's Basilica, i-Piazza S. Pietro, 00120 iVatican
Ubukhulu: 29 m
Umcwangcisi: Giovanni Lorenzo Bernini
I-Baldachin Bernini yinto yokwakhiwa kwezakhiwo kunye nezobugcisa zeVatican , idonga phezu kweqonga lecawa eliphambili lehlabathi lamaKatolika - iSt. Peter's Cathedral . Ukubunjwa kwenziwe ngumbhali ogqwesileyo waseBaroque uLorzozo Bernini. Ukwakhiwa kwalo kwenziwa ngo-1624-1633. phantsi kolawulo lukaPapa Urbano VIII.
Indawo yendawo yokukhwela ngaphakathi kwikedareli kunye nomxholo wokubunjwa
Namhlanje isitopu saseBernini siqingqiweyo esidumileyo. Yilungileyo phakathi kweholo yekedareli phantsi komngxuma wokujikeleza kwidome, le ndawo ibizwa ngokuba yi-sidetrack. Ingqungquthela ibonisa ukuba kwenziwe ngokubalulekileyo kunye nokumnandi. Iba, njengokuba kunjalo, unxibelelwano phakathi kwezinga elikhulu lekontrare kunye nokukhula okuncinci kwamakholwa.
I-Baldahin iphezu kwendawo yokungcwaba yaseSt. Peter. Ekungcwabeni (izikhalazo) zikhona izibane ezingabonakaliyo, iziqwenga ezingama-95. Le ndawo isoloko igxininiswa kwikedareli ngoncedo lwezicombululo zokwakha: iikholomu, ii-canopies, iindawo zokuphakama zisetyenzisiwe. Kwixesha le-17 leminyaka kwakhiwa indawo yokukhwela, yinto ephinda ihlaziywe ngokuphindaphindiweyo yendawo yokwakha yezakhiwo zamandulo, ezingaqhelekanga kwi-baroque, kodwa kunengqiqo, sicinga ukuba ngubani umthengi wokwakhiwa kwezakhiwo kunye nezakhiwo.
Iifom zokwakha izakhiwo-ezikhethiweyo zaziqhelekileyo kwiibingelelo zamasonto aseKatolika. Iifolothi ezinjalo zifuzisela i-canopy yombumba (i-baldacchino (it.) - ngokoqobo "itykiki ye-silk yaseBaghdad"), eyayiqhutyelwa phezu kwentloko yipapa kwieholide ezibalulekileyo zeeholide. Uqobo lwakhe, uBernini, ngaleyo ndlela wadalwa, ngokwesiko lemifanekiso yamandulo, ngokuphindaphindiweyo ngesakhiwo esifanayo se-Old Basilica kaConstantine.
Amandla kunye nobabalo bodonga
I-Baldahin inokuphakama okumangalisayo-malunga ne-29 m-kwaye iyona isakhiwo esikhulu sebhasi. Kuthatha izinto ezininzi ukuyidala. Icandelo lalo laziswa ukusuka eVenice, basusa ibhondi ukusuka kwidome ye-cathedral. Kodwa oku kwakungekho okwaneleyo. Emva koko u-papa wayala ukuba asuse ibhedu kwi-portico yePalheon, apho amanye amakholwa ayelahla ukwakhiwa. Kulo mfanekiso wePasquino ecaleni kwesikwere. U-Navona wayenobhaliso obonisa ukuba uBernini uya kugqiba oko ababenzileyo babenzile. Ngendlela, ukubunjwa kwakunombhali-mbambano, ogama lakhe lingabonakali kumsebenzi - ungumakhi wezakhiwo owaziwayo ngexesha loBorromini.
Ababhali baqaphela indlela efanelekileyo yokuphakama kunye nemilinganiselo yombhobho kunye nobukhulu be-cathedral ngokwayo. Ukugujwa okukhohliweyo kwikholam kukhange ngekhono ngesilonda sebhedu kwaye ubonise ingcamango yokukhula okungapheli kunye nophuhliso. Ubabalo lwesakhiwo lugxininiswe kwaye umdlalo othakazelisayo wembala emnyama neyegolide, njengoko zombini iikholomu zethusi kunye neengqungquthela ezenziwe ngombala zihlanganiswe kumnyama. Oku kufanele kuthetha ngokubaluleka nobuqaqawuli becawa.
UBernini wayilungisa ikhefu lakhe ngamathuba ambalwa kwinqanaba leprojekthi. Ngenxa yoko, limela ezine eziphakanyisiweyo eziphakanyisiweyo zamakholomu, eziphakamileyo zazo zithweswe izithandathu zezithunywa zezulu ezixhasayo ibhola kunye nomnqamlezo (ukufuzisela ihlabathi elikhululiwe lobuKristu).
Amakholomu afakwa kwiziseko zeemabula eziphezulu. Kwiphezu eliphezulu lazo zibonwa neenyosi, ezibonakalisa intsapho yeBarberini, ekubeni isakhiwo sakhiwa phantsi kolawulo lukaPapa Urban VIII (Barberini). Ngaphambi kwalo msebenzi, uBernini wayenomfanekiso. I-Baldakhin yaba yindalo yakhe yokuqala kwindawo yesakhiwo. Ukuxutywa ekuboneni ngedonga elimangalisayo lomsebenzi waseMichelangelo, ungumklamo wezakhiwo kunye nezobugcisa ezifunyanwa yihlabathi lonke.
Kwaye kwiminyaka yokudalwa, kwaye namhlanje i-canopy yaseBernini imangazela nakwezokhenketho kude nommandla wobungcali, kubangela ukuba kube nempembelelo enamandla. Kuyamangalisa ukuba i-kedareli ivuleke kakhulu kwaye iphakame indawo yayo apho i-giant canopy evela emnyango, kwaye nangakumbi kunjalo ukusuka kwidome, ibonakala ingenangqondo kakhulu. Ngenxa yoluvo oluvakalayo, wonke umntu oye watyelela iTt Peter Cathedral ucebise ukuba a tyelele enye yezona ndawo zibalaseleyo kwaye zibaluleke kakhulu emhlabeni kwaye ujabule ubuqaqawuli bomsebenzi kaBernini.
Ukuze ubone i-canopy, kufuneka uvakashele iSt Peter Cathedral, esecaleni kunye negama elifanayo. Ukwenza oku, thabatha umgca Umgca wokufikelela kwisikhululo sase-Ottavio uze uwele iSt. Peter's Square. Ukungena kwi-kedareli akukho ntlawulo, i-euro eziyi-7 iya kuhlawulwa kuphela ngabo bafuna ukunyuka kwidome. Ngendlela, ukusuka apho imbonakalo emangalisayo ivula, kukuvumela ukuba ubone imibala yomsebenzi kaBernini.
Igalari yeemephu zeendawo
Ididi yesiponisi sepine
Ithempeli likaJovan Vladimir
I-Mosque kaSheikh Zamil Abdullah Al-Zamil
ICarlls entsha glyptoteka
UJack noLisa Osborne "belindele" umntwana wesithathu!
Itheyibhile ephezulu yenziwe ngemithi yekhitshi
I-Kaizen - ulawulo lweJapan
Iintlanzi zeenwele ezimfutshane 2014
I-dog diarrhea - izizathu kunye nonyango
Ukugijima ebusika esitrato ukulahlekelwa ubunzima
Indlela yokondla unina onomntwana?
Ukuxhamla kubantu abadala
Isitulo sokondla umntwana kumama
21 Isizathu Sokuxelela Inja Yakho "Ndiyabonga"
Ingcali yatsho isizathu sokuba iPrince George ihlale ibonwa kunye noyise, kunye noCharles Charlotte nonina
Usuku lwehlabathi lweeReds
Exerciser ukululaza umlenze
Kutheni abantwana beselula begqoka emnyama?
Ungagcina njani i-daikon ebusika?
Uthandekayo uBrithney Spears wagubha iminyaka yakhe yokuzalwa engama-23
Iindonga ze-mini zegumbi lokuhlala
Amacici nge-amethyst - ukhetho lwezithombe zamacici amahle nge-amethyst yemvelo